Andre Schurrle Oo U Tilmaamay Xulkiisa Germany Waxa Looga Baahan Yahay Si Ay Ugu Guuleystaan Euro 2016 | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Andre Schurrle Oo U Tilmaamay Xulkiisa Germany Waxa Looga Baahan Yahay Si Ay Ugu Guuleystaan Euro 2016
Andre Schurrle Oo U Tilmaamay Xulkiisa Germany Waxa Looga Baahan Yahay Si Ay Ugu Guuleystaan Euro 2016
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 23-06-16 9:35 PM Andre Schurrle ayaa caddeeyey inay xulka Germany u baahan yihiin inay noqdaan kuwo si dhaqsi ah u dila rajada xulalka kasoo horjeeda haddii ay doonayaan inay ku guuleystaan tartanka Euro 2016.
Xulka heysta Koobka Adduunka ayaan u muuqan inay yihiin xulkii manaxariisteyaasha ahaa ee laba sanno ka hor Koobka Adduunka kusoo qaaday Brazil iyagoo aan qaab ciyaareed la jecleysto kusoo bandhign dalka France, ciyaartoodii ugu dambeysay guul 1-0 ah ayey ka gaareen xulka yar ee Northern Ireland inkastoo ay fursado badan abuureen.
Goolkaas guusha ayaa waxaa u dhaliyey khabiirkooda weerarka Mario Gomez, kaasoo booska looga bedelay Mario Gotze oo ku fashilmay weerarka dhexe isla markaana kulankaas laga ciyaarsiiyey garab weerar ah.
Jarmalku keliya seddax gool ayey dhaliyeen seddaxdii kulan ee ugu horreysay tartankaan Euro 2016, Gomez ayaana ah weeraryahanka keliya ee shabaqa soo taabtay, halka labada gool ee kale ay ka yimaadeen xiddigo ka ciyaara daafaca iyo qadka dhexe. Gotze iyo Thomas Muller ayaana ku fashilmay weerarka dhexe.
Xiddigii hore ee Chelsea Schurrle ayaana talo muhiim ah usoo jeediyey ciyaartoyda xulkiisa: “Haddii aad daawatay qeybtii hore ee kulankii aan la ciyaarnay Northern Ireland waxaad durba arkeysaa sida aan uga xooganahay weerarka. Waxaan sameynay fursad badan, laba jeer ayaanse kubadda birta ku dhufanay.
“Laakiin waxaan u baahanahay inaan lasoo baxno dabci dilaanimo ciyaaraha wareegyada xigga. Lix ama todobo fursadood oo wanaagsan ayaan abuurnay kulankii aan wajahnay Northern Ireland keliya hal gool ayaana dhalinay.
“Laakiin marka aan wajahno xulalka waa weyn waxaa laga yaabaa inaan abuurno laba ama seddax fursadood ka dibna haddii gool lagaa dhaliyo waad ka hareysaa tartanka, sidaas darteed waxaan u baahanahay inaan horumar ka sameyno xaaladdaan. Waxaan u baahanahay inaan noqono kuwo leh dabci dilaanimo oo dila xulalka kasoo hotjeeda ka dibna waan ku guuleysan karnaa koobkaan.”